Download Google Earth Pro Cracked - Gofumed
Maarso, 2008 Internet iyo Blogs
Waxaad aragtaa, taasi waa waxa aan dhahayo ... Waxaan uun qoraa weedho sidan oo kale ah iyo blogku wuxuu booqashooyinka ka baxsan yahay caadi ahaan. 🙂
Blogs ma taageeri karaan budhcad-badeednimada, haddii aan sameyno waxaa lagu ciqaabi doonaa oo kaliya ma aha Google AdSense laakiin meelo isku mid ah oo aan ku kaydino xogta. Waxaan ku adkeysanayaa in naceybka Google, in adeegga Blogger uusan waxba ka qabanaynin ciqaabta goobaha gebi ahaanba loogu talagalay in lagu dhiirrigeliyo sharci-darrada, iyo sidoo kale Jawaabaha Yahoo.
Marka laga hadlayo jawaabaha Yahoo, inkasta oo siyaasadahooda adeegga ay yiraahdaan dadku ma taageeri karaan budhcad-badeednimada ... iyagu uma maleeyaan doorka sharciyeed ee ay kuugu filan tahay inaad ku qorto:
Ma jiraa cid garanaysa sida aan u heli karo mashruuca Google Earth oo dillaacay iyo in uu shaqeynayo?
Iyo Yahoo, ayaa daryeeli doona ku saabsan ...
Waxaan ku jiraa kadibna waxaan qabaa ... Burcadbadeedku ma joojin karaan hal maalin? inkasta oo ay badanaa tahay habka ugu wanaagsan ee suuq-geynta shirkadaha qaar loo isticmaalo si ay u midoobaan suuqa.
Post Previous«Previous Geofumadas oo ku saabsan duulimaadkii March 2008
Post Next Dib-u-hagaajinta nolosha laptop-kaNext »
10 jawaabta "Download Google Earth Pro crack"
Sida aad adiga, Juan, Waxaan u maleynayaa inay tahay wax aan cadaalad aheyn in BitCAD ay u qalantid $ 400 waana mid tartan ah sida AutoCAD, oo ku dhowaad 10 waqtigaan.
Laakiin si ay waxba idiinma tarin, maxaa yeelay, suuqa waxaa gacanta ku AutoCAD, iyo haddii farsamo sameeyay madal sida ardayda jaamacadda, waxaan aaminsanahay in kuwan madhan waayo marka waa in ay la kulmaan suuqa shaqada u baahan doonaa software caan ah.
Waxay dhacdaa in "qaali" uu sidoo kale yahay mid ku saleysan macnaha guud, sababtoo ah gudaha Mareykanka, shaqaale McDonalds oo leh mushahar bil ah wuxuu iibsan karaa AutoCAD, halka meelaha kale ee Latin America, 19 mushaharka ugu yar looga baahnaan lahaa. Sidaa darteed, ardayga si uu u helo laysan waa inuu soo saaro ku filan si uu u iibsado.
Waxaan u maleynayaa in software lacag la'aan ah ama qiimo jaban tahay inay nasiib wacan leedahay.
Juan Eduardo Zuñiga Diaz isagu wuxuu leeyahay:
BADBAADADA WAXAY TAHAY DEMBIGA AAN LA'AAN AH.
Waxaan ogaaday in kuwa sheeganaya inta badan mawduuca isticmaalka naqshadeynta software, waxaan u maleynayaa waxa aan caddaalad ahayn waa in la qoro weedhahan soo socda:
"Laakiin dabcan, ganacsi injineernimo oo bilaabaysa, oo ay aasaaseen arday dhowaan ka qalin jabisay jaamacadda ma awoodo inay bixiyaan $ 7,000 oo loogu talagalay AutoCAD Civil 3D (mashiinkiiba) maxaa yeelay qiimaha waa mid xad dhaaf ah."
Su’aasheyda ayaa ah, miyaanay isla shirkada mid ama laba mashruuc bixin karin qiimahaas?
Ama qareen keli keli keli ah, miyaanan isku mid aheyn ilaa 10?
Dhakhaatiirta (takhaatiirta) isticmaalayso ecotomografías technology HP mashquulin marwooyin software, iyo laba qof oo ah kala iibsiga ogaanshaha kharashka liisanka software hal 1 in bukaan oo kaliya ay leeyihiin door iyaga oo caddeynaya sida dhakhaatiirta.
Dhibaatada ugu wayni waa inaadan burcad-badeed samayn karin, sababtoo ah sharcigu ma oggola inaad muujiso qorshe uu qof sameeyay haddii aanad saxiixin nooca taas oo sameeyn laheyd software isku mid ah laakiin waxay leedahay horyaalka.
Ka xun weli ma ka dhigi kartaa nuqul ka mid dillaac ah qareen, xataa haddii aad leedahay sharciga ka online (taas oo ah lacag la'aan ah) si aad u difaacdo naftaada, waxaad u baahan tahay ruqsad qareen ah in ay ku dhaqmaan iyo in kharash badan ..
In the case of dhakhaatiirta waa arrin nolol iyo geeri ... aan wax badan wax sharci ah, maxaa yeelay, waxay yihiin sharciyada oo aad xoog ah u bixiyaan dhakhtar si resetarte dile ah in si fiican u qaban karo software (oo sidoo kale free) Baadhista xanuunada in dhamaadka aad leedahay is dajiyaan sababtoo ah kharashka dhakhtarka in ay u soo iibsadaan a deji nasteexo fudud hubaal ka saari doonaan.
Kuwa ruqsadaha runtii waa runtii waa sababtoo ah marna ma iibsan laysanka software.
Waa sidee sida wanaagsan
hooyadaa isagu wuxuu leeyahay:
aad ayaad tahay
haddii aad ogtahay ereyga la jabsaday waa sababta oo ah asesa
ama ii sheeg haddii ay run ahayn in aad ka fikirtay ka hor
Aad ayay iigu fiicantahay inaan waxbarto
Waxaan u maleynayay in ay dhexdhexaadiyaan faallooyinka laakiin waxaan qabaa inaan ku raaxeysto.
aabbahaa isagu wuxuu leeyahay:
naga naga naga nadiifi, dhulkayga iigu si fiican u dillaac
Waa su'aal haddii ukunta ama digaaga.
Shirkadaha waaweyn ayaa sheegaya in qiimaha softwareku uu aad u sarreeyo sababtoo ah waxay ogyihiin in burcad-badeednimadu ay sareeyso.
Laakiin dabcan, ganacsi injineernimo oo bilaabaysa, oo ay aasaaseen arday dhowaan ka qalin jabisay jaamacadda ma awoodaan inay bixiyaan $ 7,000 oo loogu talagalay AutoCAD Civil 3D (mashiinkiiba) maxaa yeelay qiimaha ayaa ah mid xad dhaaf ah.
salaan ... iyo rajo hal maalin maalin aduunka tiknoolajiyada waa mid caddaalad ah
Gerardo64 isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo ku saabsan mawduucan ...
Just Uma maleynayo in nuqul 1 barnaamijka sida 3D Studio Max kici U $ S 3.500.- soo saarka A ka badan 15 sano la soo koraya ku salaysan isla. Isla sidaas oo kale qof kasta oo kale; Imisa ayuu 1 u qalma nuqul ka mid ah Photoshop? Intee ayaa lexejeclahay Adobe qiimaha nuqul kasta? Qiimaha software waa la xiriira in la isticmaalo ganacsi aan u sameeyo (sababta kuwa qiimaha) ee, laakiin in la mid ma aha sida mid annagu aannu copper shirkadda telefoonka by haddii aynu salaamay dhalashadiisa our ayeeyo ama Ma waxaan xidhnay ganacsiga 1 kumanaan dollar? Sidee shirkadu u go'aamiyaan sida aan u isticmaalo barnaamijka?
Maalinta shirkaduhu daacad ka ahaadaan qiimahooda, ka dib burcad badeednimadu way yaraan doontaa. Mise qiimahoodu maanta dhib ma leh? Qof baa dhihi kara, "Hagaag, haddii aadan iibsan karin Ferrari, soo iibso Fiat .." laakiin waxaa muuqata in arrimaha la xiriira kombiyuutarrada, marar badan ama aysan Fiat ama Ferrari ku cunin adigoo iibsanaya warshaddiisa.
Luiz Amadeu isagu wuxuu leeyahay:
Istaraatiijiyadda Boa ee soo jiidata booqashooyinka maaha goobta ... Falar wax xaqiiqda ka muuqata. :-p